संसद्मा ‘गलबन्दी च्यातियो ...’ गीतको चर्चा
२०७६ असार १० मंगलबार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसमाको बैठकमा सांसदहरुले ‘गलबन्दी च्यातियो ...’ शीर्षकको गीतका सम्बन्धमा कुनै समुदायमाथि नै आघात हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा भएका टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउँदै दोषीलाई कानूनी कारवाही गर्न माग गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
संसदको राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको गुठी विधेयक आज सरकारले फिर्ता लिदै
२०७६ असार १० मंगलबार, काठमाडौं। संसदको राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएको गुठी विधेयक आज सरकारले फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले शुक्रबार बिधेयक फिर्ताको औपचारीक पत्र राष्ट्रियसभामा पठाएपछि राष्ट्रियसभाले प्रक्रिया आज बढाउन लागेको हो। ... बाँकी अंश»
पहाडमा प्राथमिकताका साथ सुरुङमार्गको अध्ययन गरिने
२०७६ असार ९ सोमबार, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पहाडी क्षेत्रमा सडकको दूरी कम गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि विशेष प्राथमिकताका साथ सुरुङमार्गको अध्ययन गर्ने कार्यक्रम राखिएको बताएका छन् । ... बाँकी अंश»
संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटकीय क्षेत्रसम्बन्धी कार्यविधि साहूहरु पोस्ने नियत : गगन
२०७६ असार ९ सोमबार, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका काँग्रेसका सांसद गगन थापाले सरकारले संविधान र कानून विपरित साहूहरुलाई पोस्नेगरी कार्यविधि तयार पारेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। ... बाँकी अंश»
२०७६ असार ८ आइतबार, काठमाडौं । सरकारले सामाजिक कुरीति र कुसंस्कारको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथा अन्त्यका लागि योजनाबद्ध कार्यक्रम अघि सारेको छ । ... बाँकी अंश»
२०७६ असार ८ आइतबार, काठमाडौं । सरकारले ‘नेपालको वन जनताको धन’का रुपमा विकास गर्ने गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम, बजेट र नीति तथा योजना तय गरेको छ । ... बाँकी अंश»
को हुन् इन्टरनेटका मालिक ? सेवा प्रदायकहरु मालिक कि उपभोक्ता ?
२०७६ असार ७ शनिबार, काठमाडौं । इन्टरनेट हाम्रो दैनिकीको जरुरी हिस्सा बनिसकेको छ । आज हरकाममा हामी इन्टरनेटको मद्दत लिने गर्दछौं । सामान्य घरेलु कामदेखि ठूला ठूला सैनिक तालिमहरुको लागि ... बाँकी अंश»
२०७६ असार ६ शुक्रबार, काठमाडौं । शहरी विकासमन्त्री मो इस्तियाक राईले काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरकै फोहर व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्पन्न हुने गरी प्रारम्भिक चरणको ठेक्का भइसकेको जानकारी दिएका छन् । ... बाँकी अंश»
प्रतिनिधिसभाको बैठक : बजेटबारे बहस नभई आरोप प्रत्यारोप
२०७६ असार ५ बिहिबार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहिबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदले सरकार प्रमुखले सदनमा अधैर्‍यता प्रस्तुत गरेको र अनावश्यक विधेयक दर्ता गराइ असीमित अधिकार बटुल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७६ असार ४ बुधबार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदले भौतिक पूर्वाधारको कामलाई तीव्ररुपमा अगाडि बढाउन प्रक्रियागत झण्झट हटाउन तत्काल सार्वजनिक खरीद ऐनको संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ... बाँकी अंश»
२०७६ असार ३ मंगलबार, काठमाडौँ । मंगलबारको संसदमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदलाई पहिले प्रधानमन्त्रीको कुरा सुनौँ त्यसपछि तपाईंहरुलाई बोल्न समय दिन्छु भन्दै पटक पटक आग्रह गरे तर लगातार नेपाली कांग्रेसको नाराबाजी चलिरह्यो । ... बाँकी अंश»
२०७६ असार ३ मंगलबार, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको अवरोधका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रोष्ट्रममा पुगेर पनि सम्बोधन नगरी फर्किएका छन् । ... बाँकी अंश»
प्रेस विरोधी विधेयकहरु फिर्ता हुनुपर्छ : नेतृ संग्रौला
२०७६ असार २ सोमबार, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसकी नेतृ डा डिला संग्रौलाले सरकारले ल्याएको प्रेस विरोधी विधेयकहरु फिर्ता लिनुपर्ने बताएकी छिन् । प्रतिनिधि सभामा विशेष समयमा बोल्दै नेतृ संग्रौलाले सूचना र ... बाँकी अंश»
''यो देश संविधानले चलेको छ भने लोकसेवा आयोगको निर्णय फिर्ता होस्''
२०७६ असार २ सोमबार, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टीले यो देश संविधान अनुसार चलेको हो भने लोकसेवा आयोगले लिएको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
संसदमा काँग्रेस : ''सरकार आँखा नदेख्ने भएको छ, परिणाम नराम्रो आउनसक्छ''
२०७६ असार २ सोमबार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा नेपाली काँग्रेसले सोमबार पनि गुठी विधेयकको विषयमा विरोध गरेको छ । बैठक सुरु भएलगत्तै काँग्रेस सांसदहरुले यसको विरोध गरेका हुन् । ... बाँकी अंश»
विधेयक पारित भए 'अरिङ्गाल'हरुमात्रै सुरक्षित : गगन थापा
२०७६ असार १ आइतबार, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले नेपालमा सरकारका 'अरिंगाल'बाहेक अरु सबै असुरक्षित रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै ... बाँकी अंश»
२०७६ असार १ आइतबार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले गुठीका सम्बन्धमा आएको पछिल्लो विधेयकले समस्या समाधान गर्ने नभई थप बल्झाउने टिप्पणी गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
संसदमा काँग्रेसको चेतावनी : गुठी विधेयक क्यान्सरको रुपमा विकास हुनसक्छ
२०७६ असार १ आइतबार, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले गुठी विधेयकको विषयमा आईतबारको प्रतिनिधि सभामा पनि विरोध गरेको छ । आईतबार बैठक सुरु भएसँगै प्रतिपक्षी दलहरु काँग्रेस र राजपाले ... बाँकी अंश»